Hery Rajaonarimampianina-HATOLOTR’IREO AMPANJAKA HO KANDIDA AMIN’NY 2018 -
AccueilLa UneHery Rajaonarimampianina-HATOLOTR’IREO AMPANJAKA HO KANDIDA AMIN’NY 2018
05/01/2017 hasina La Une, Raharaham-pirenena 0
Mazava ny fanohanana. Nambaran’ny fikambanan’ireo Ampanjaka avy amin’ny Faritra Atsimo Atsinanana (AA) sy Vatovavy Fitovinany (V7V) ampahibemaso nandritra ny fandalovan’ny filoham-pirenena tany Farafangana, omaly, fa manolotra ary manohana an’i Hery Rajaonarimampianina amin’ny fifidianana 2018 izy ireo.
Raha ny vaovao voaray, nanatanteraka fivoriambe sady fihaonana an-tampony mantsy ireo Ampanjaka tamin’ireo Faritra roa, AA sy V7V, ny talata 3 Janoary teo, tao Farafangana ihany. Tamin’izany fikaonan-doha izany indrindra no namoahan’izy ireo sy ny fikambanana fehin-kevitra maromaro naroso tamin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina omaly, ka anisan’ny goavana nivoitra tamin’izany ny fanohanana sy fanolorana ny filoham-pirenena ho kandidà amin’ny fifidianana 2018. Tsy vitan’izay fa hampanohana izany fehin-kevitra izany koa izy ireo miainga any amin’ireo Faritra roa ireo.
Voalaza mantsy fa anisan’ny nanosika ireo Ampanjaka amin’ny fanohanana sy hampanohanana ny filoham-pirenena amin’ny firotsahan-kofidiana amin’ny fifidianana 2018 ny asa efa vita sy natomboka hatramin’ny nandraisany ny fitondrana ny firenena. Anisan’izany ny fahavitana sy fanamboaran-dalana mirefy 5 km tao an-tampon-tanànan’i Farafangana, izay nampanantenain’ny filoham-pirenena. Voalaza mantsy fa tsy hijanona eo ny fanomezana fotodrafitrasa amin’ireo Faritra roa ireo.
Ankoatra izay, marihina fa raiamandreny goavana amin’ny faritra na toerana misy azy ny Ampanjaka. Masina ary masi-mandidy amin’ny taniny izy ireo. Noho izay indrindra, to teny amin’ireo mponina amin’ireo faritra misy azy ny Ampanjaka.
Etsy andaniny, nitsodrano ny filoha Hery Rajaonarimampianina amin’ny fanatanterahana ny adidy hiantsorohany amin’ny fitantanana sy fitondrana ny firenena ireo Ampanjaka.
Thierry Rakotonarivo – Lalàm-panorenana : Azo atao alohan’ny fifidianana filohan’ny repoblika
Fampandrosoana : Hitokana fotodrafitrasa maromaro any Antsiranana ny Filoha